Ka 21, 2018 admin
Philippines sec kọmishọna arịọ kaadị nketa oke’ nzaghachi on iwu
The Philippines 'ahịa regulator, na Securities na Exchange Commission, -achọ ọsọ ọsọ nke kaadị na blockchain “nketa oke” aka ụlọ ọrụ gọọmenti na drafting kwesịrị ekwesị iwu maka ohere.
Sec Commissioner Ephyro Luis Amatong kwuru na a nzukọ nke Philippine Association of Digital Commerce na Decentralized Industry, na kwuru:
"The ọchịchị chọrọ ịbụ proactive na-eke iwu banyere cryptocurrency. Anyị chọrọ na-arụ niile nketa oke site na-arịọ maka nzaghachi gị. Anyị achọghị iji tie iwu megide ihe ọ bụla n'ihi na anyị na-aghọtaghị ihe. Ọ bụ ya mere gị nzaghachi na gị imekọ ihe ọnụ dị mkpa otú anyị nwere ike gbagote na kwesịrị ekwesị na-achị banyere cryptocurrency trading. "
Colorado na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ike n'oge na-adịghị na-anabata kaadị onyinye
The ala nke Colorado nwere ike n'oge na-adịghị ekwe ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na kọmitii ndị ga-anabata onyinye na cryptocurrency.
The Office nke Colorado Secretary of State bipụtara a ọhụrụ na-arụ ọrụ draft nke ya “Iwu Banyere Mgbasa Ozi na Political Finance” nke Ichi na-agụnye a ọhụrụ ngalaba na cryptocurrency onyinye.
The chọrọ nduzi na-ekwu,:
“A otu nwere ike na-anabata onyinye na cryptocurrency, ruo-anabata anọru a ego ma ọ bụ na mkpụrụ ego onyinye. The ego nke onyinye bụ uru nke cryptocurrency n'oge nke onyinye. The kọmitii ga na-akọ ihe ọ bụla uru ma ọ bụ ọnwụ mgbe onyinye dị ka ndị ọzọ ego ma ọ bụ receipts.”
Russia & Iran na-ekweta na cryptocurrencies ike ga-eji zere Swift nakwa n'obodo
Irans isi nke aku na uba na ihe omume, Mohammad Reza Purebrakhim, kọwara iji digital ego ka pụtara gbanahụ mmetụta nke dollar dị ka a “ekwe direction.”
Nke a na-atụle ná nzukọ ya na isi nke Russian Federation Council Committee on Economic Policy Dmitry Mezentsev ebe ma Russia na Iran kọwara kaadị dị ka ndị a nnọchi nke Swift interbank ugwo usoro, ojiji nke nke ga-imeda ọ bụla ego n'obodo machibidoro mba, na-eme Russia na imekọ ihe ọnụ Iran na ndị a uru nke na-eji kaadị.
CoinGate ẹkedori Bitcoin Lightning Network ugwo nhazi
Ịkwụ Ụgwọ processor ọrụ CoinGate amalitela anwale Lightning Network.
The ụlọ ọrụ bụ na-enwe olileanya na-aghọ akpa ugwo processor ịnabata LN ego na ndụ ọnọdụ.
Unionbank na Philipp ...
Ka 28, 2018 na 1:46 PM
Ka 28, 2018 na 7:55 PM
June 21, 2018 na 8:41 PM